माया प्रेममा प्रचण्ड र माधव नेपाल! बुझ्नुभएन? हेर्नुस सत्य सुन्दा ३ करोड नेपाली चकित – नेपाली सूर्य
माया प्रेममा प्रचण्ड र माधव नेपाल! बुझ्नुभएन? हेर्नुस सत्य सुन्दा ३ करोड नेपाली चकित
January 30, 2018 Nepali SuryaLeaveaComment on माया प्रेममा प्रचण्ड र माधव नेपाल! बुझ्नुभएन? हेर्नुस सत्य सुन्दा ३ करोड नेपाली चकित
काठमाडौं । पहिलो संविधानसभामा एमाले नेता माधव नेपाल दुई ठाउँबाट हारेका थिए । तर, उनको आवश्यकता संविधानसभामा महसुस गरेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै पहलमा सभासदमात्रै बनाइएन, गणतन्त्र नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्रीसमेत बनाइयो ।
विगतका राजनीतिक उतार-चढावलाई बिर्सेर अहिले एमाले र माओवादी मिलेर चुनाव लडेका छन् । एमाले नेताहरुको चुनाव प्रचारमा माओवादी र माओवादी नेताहरुको चुनाव प्रचारमा एमालेको टोली खटिएको छ । यो वाम गठबन्धनलाई अब पार्टी एकतासम्म पुर्‍याउने दुबै दलका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । -अनलाइनखबर
कोरियामा कम्पनि परिवर्तन गर्न चाहने नेपालीहरुले जानकारीको लागि हेर्नुहोला
सहिद दिवसकै दिन ओलीले पार्टी एकताबारे विज्ञप्ति निकालेर यसो भने